Yakachena kuchena yakakwira density yakakwira strenth graphite zvigadzirwa Vagadziri & Vatengesi | China yakakwira kuchena yakakwira density yakakwira strenth graphite zvigadzirwa Factory
Graphite anode ndiro
Graphite anode plate, anode barrel, graphite anode rod (inozivikanwawo se graphite anode plate, graphite anode rod) ine hunhu hwakanakisa: yakanyanya tembiricha yekudzivirira, yakanaka kuitisa uye kupisa kupisa, machining ari nyore, yakanaka makemikari kugadzikana, asidhi uye alkali ngura kuramba, yakaderera zvemukati zvemadota. The chigadzirwa rinoshandiswa electrolyzing aqueous mhinduro, kugadzirira chlorine, caustic pasoda, electrolyzing munyu mhinduro kugadzirira alkali, kana kuti electroplating siyana simbi uye asiri-simbi vatakuri Somuenzaniso, ari graphite anode ndiro inogona kushandiswa sezvo conductive anode kuti electrolyzing munyu mhinduro yekugadzirira caustic soda. Inogona zvakare kushandiswa pakurapa tsvina mumakemikari, emagetsi uye emachira maindasitiri. Mune cell electrolytic cell, iyo pole kubva kwazvino kuyerera ichienda ichienda kune imwe mune iyo electrolyte inonzi anode. Mune indasitiri yeelectrolysis, anode inowanzo gadzirwa kuita chimiro cheplate, saka inonzi anode ndiro. Hunhu hweanode zvigadzirwa zve electrolysis:
Graphite Mould yeGirazi Indasitiri
Graphite muforoma ine yakanaka yakakwira tembiricha kuramba, kugadzikana kuita pane yakanyanya tembiricha, shoma kupisa kuwedzera uye kutonhora shrinkage, iyo inogona kufuratirwa; graphite ine mafuta akanaka, uye girazi remvura harisi nyore kunamatira pane chakuvhuvhu panguva yekusimbiswa, uye ine yakanaka yekupisa conductivity, kupfeka kuramba, yakasimba mega simba uye mamwe maitiro. Mukugadzirwa kwemaindasitiri, kuti uwane mhedzisiro yekugadzira chaiyo, hazvifanirwe kusarudzwa chete graphite zvinhu, asiwo dhizaini ye graphite muforoma, kugadzirisa mhando uye kumisikidzwa kwakakodzera mukushandisa kwakakosha kwazvo. Isu tinokwanisa kupa nyanzvi yehunyanzvi rutsigiro kubatsira vatengi kusarudza chaiyo graphite zvinhu mukugadzira, dhizaini uye maitiro graphite muforoma yakakodzera zvigadzirwa zvekugadzira, uye tinoda kuteerera kune vatengi 'maonero nokungwarira, uye kugadzirisa matambudziko akasangana nevatengi mukushandisa.
Electron beam evaporation graphite chikepe
Super graphite evaporation chikepe / graphite thermal evaporation Kukuru Mukutonga / Erekitironi danda kwemvura chikepe / bemhapemha Vacuum aruminiyamu yakanamirwa pamifananidzo nesilicon yakanamirwa pamifananidzo / nakisa graphite kwemvura chikepe / Erekitironi danda evaporation kuputira chinhu chishandiso graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist
Graphite ye rotary kiln
Graphite inogona kushandiswa sekuisa chisimbiso uye kuzora zvinhu, uye inoshandiswa zvakanyanya mune dzakawanda simende rotary kilns.Iine zvinangwa zviviri zvikuru: imwe inoshandiswa kuvhara musoro wevira uye muswe wezira, uye imwe inoshandiswa kugirisa pakati pevhiri rinotakura uye bhandi revhiri. Zvigadzirwa zve graphite zvinoshandiswa mune zvese zviri zvebhuroko dhizaini.
Laser graphite kangaidza / graphite kangaidza
Graphite inosemesa ine yakanaka yemagetsi conductivity, yakanyanya kupisa tembiricha, acid uye alkali kuramba, ngura kuramba uye nyore kugadzirisa.
Oxidation nemishonga graphite mhepo mutopota
Graphite rotor inoumbwa nezvikamu zviviri: rotor tsvimbo uye kamwene. Iyo yekufambisa nzira inotyaira graphite rotor kutenderera, uye argon kana nitrogen inoputirwa musimbi yakanyungudika kuburikidza neiyo rotor tsvimbo uye kamwene.
Graphite dhisiki electrode yemafuta spectrometer
Pfeka simbi uye zvinosvibisa mumafuta zvinogona kuve mhepo uye kunakidzwa neyakagadziriswa arc kubuda kunoitwa nekutenderera disc tekinoroji. Hunhu hwakasarudzika uye mareferenzi emitsara inounganidzwa uye inochengetwa mumachubhu eephotomultiplier, kuchaja zvakabatanidzwa michina kana mamwe matikitivha akakodzera.
Graphite semicircle chikepe
Graphite semicircle chikepe chakagadzirwa ne graphite zvinhu, izvo zvine zvinotevera zvakanakira: yakakwira tembiricha kusagadzikana, yakanaka yekuzvizora-kuita mashandiro, nyore kusundira uye kudhonza, hazvisi nyore kubatanidza zvimwe zvinhu, simba rakakwirira, kwete nyore kukuvadza.
Graphite hita imhando yekupisa muviri wepamusoro tembiricha choto. Iko tembiricha yechigadzirwa inogona kukwidziridzwa nekukurumidza nemagetsi
Yakachena kuchena graphite chubhu
Yedu graphite chubhu inogadzirwa yakachena kuchena graphite, Graphite inozivikanwa seimwe yeakanyanya-epamusoro tembiricha inodzivirira zvinhu. Nzvimbo yayo yekunyungudika ndeye 3850 ℃ + 50 ℃, inotonhora ye450 ℃. Mhando dzakasiyana uye madhimoni graphite machubhu anoshandiswa mukupisa vhara vhara, inopisa nzvimbo.